Ngwọta Njikwa oru ngo maka ndị ndụmọdụ -MarTech Blog
Thursday, January 27, 2011 Wednesday, May 2, 2012 Tim Piazza
E nwere ụdị ọrụ atọ. Ndị ị nwere ike ime n'onwe gị, ndị ị ga-akwụ onye ọzọ ụgwọ ka ọ rụụrụ gị, yana ndị ị ga-achọ iso ndị ọzọ rụkọta ọrụ. Nchịkọta oru ngo management bụ maka ụdị nke atọ.
Enwetara m Mavenlink n'oge na-adịbeghị anya, ngwa njikwa njikwa igwe ojii nke yiri Basecamp, mana na-elekwasị anya na mkpa nke ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na ndị nweere onwe ha. Mavenlink na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ, na-akpọ ndị ahịa, ma kenye ọrụ na ebumnuche maka mmekọrịta na nkwukọrịta ka mma, dị ka Basecamp. Ihe setịpụrụ Mavenlink iche bụ mgbakwunye nke njikwa njikwa ịgba ụgwọ.
Mepụta oru ngo na Mavenlink ma ị nwere ike ekenye mmefu ego. Na ị na-eme atụmatụ ihe omume a, ị na-ewepụta ọrụ na ihe nnyefe. Mgbe ahụ i nwere ike soro mmefu na oge na onye ọ bụla oru ngo site na ọrụ, ma ọ bụrụ na oge bụ billable, ịtọ oge awa. Ka ịgba ụgwọ na-agbakọta, dashboard ngo ahụ na-egosi gị na onye ahịa ebe ị kwụ na mmefu ego.
Achọpụtara m akụkụ ịgba ụgwọ ka ọ bụrụ isi ihe dị na ngwa ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ. Freelancers na ndị ọkachamara na-arụkarị ọrụ na ndị ahịa na ntọala ọrụ, ọ nwere ike isi ike ijide ma kọọ oge niile ejiri. Inye usoro maka nyocha ego na ịkọ akụkọ bụ ihe bara uru nye onye na-ere ahịa na onye ahịa ya. Enwere ihe ijuanya ole na ole, ọ ga-apụta ìhè mgbe atụmanya dị iche ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe ga-egosipụta na mgbanwe mmefu ego. Mavenlink na-eme ka mmefu ego bụrụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ.
N'ihe dị iche iche n'oge oru a ị nwere ike iwepụta akwụkwọ ọnụahịa na ịnata ịkwụ ụgwọ site na ntinye PayPal. Mavenlink ji ọnụego pụrụ iche kwụọ ụgwọ na PayPal na - ewelata ụgwọ azụmaahịa ha. E nwekwara mwekota na akaụntụ Google gị, na-enyere kalịnda ịmekọrịta, ịkekọrịta akwụkwọ, na akwụkwọ ịkpọ oku.
Ngwakọta ọrụ n'ịntanetị bara uru obere ego na oge ọ na-ewe iji setịpụ ha. Basecamp na-aga n'ihu na-ewu ewu maka obere òtù ndị buru ibu iji jikwaa ọrụ ndị dị iche na ntinye akwụkwọ na ịgba ụgwọ ha. Organitù na-ahazi na mgbagwoju anya, ma ọ bụ otutu oru ngo n'otu oge nwere ike ịka mma na mmejuputa usoro ihe nkesa dika ActiveCollab. Ọ bụrụ na ị bụ onye ndụmọdụ, onye nrụpụta weebụ ma ọ bụ onye mmebe na-enweghị akwụkwọ, Mavenlink nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị maka gị.
Tags: mavenlinknjikwa ọrụ
Tim Piazza bụ onye mmekọ na Social LIfe Marketing na onye guzobere ya ProSocialTools.com, otu obere azụmaahịa maka iru ndị ahịa obodo yana mgbasa ozi mmekọrịta yana azụmaahịa ekwentị. Mgbe ọ naghị emepụta ihe ọhụụ na-eme ka usoro azụmahịa dị ngwa, Tim nwere mmasị igwu egwu mandolin na arịa ụlọ.
Aprimo: Ahịa Tech Video
Jan 28, 2011 na 4: 06 AM
M ka meghere akaụntụ Basecamp m izu ole na ole gara aga maka nke a. A sị nnọọ na m maara!
Jenụwarị 28, 2011 na 8:21 PM
Doug, n'ezie m bu gị n'uche mgbe m na-ede post m. Amaara m na ị pụọ na Basecamp wee chee ma Mavenlink ọ ga-amasị gị karịa. N’ụzọ na-adọrọ mmasị, Mavenlink dị mfe karịa na obere akpa. Gaghị ebilata kọfị gị n'ụlọ ahịa ahụ gbadara. 🙂
Jenụwarị 28, 2011 na 4:29 PM
Ana m eji PBworks. You tulee ha?
Jenụwarị 28, 2011 na 8:19 PM
Enwebeghị m… ruo ugbu a. O gosiputara m na PBworks na-arụ ọrụ dịka igwe mmadụ mmekọrịta-mashup management network. Ihe nlele m 5,280 ′ bụ na ọ na - arụ ọrụ nke ọma karịa otu ndị ka ukwuu ebe ị na - eme ka onye ọ bụla guzobe na sistemụ ahụ, ị ​​ga - adọta ha na ọrụ gị iji kpokọta echiche, eziokwu. Nke a agaghị arụ ọrụ maka onye ndụmọdụ / ahịa.
M ga-enwe mmasị nke ukwuu ịnụ echiche gị na PBworks, yana ebe ị chere na ọ kacha mma.
Jenụwarị 28, 2011 na 6:43 PM
Enwere m ekele maka post na echiche ị webatara na nyocha gị nke Mavenlink. Ezie na m n'ezie a obere ele mmadụ anya n'ihu (dị ka a nchoputa nke Mavenlink), na ike na-eche ihe mere ị ga-eji ActiveCollab :), Echere m na i mere oké ọrụ nke na-enyocha ohere na ike nke ndị sonyere.
Jenụwarị 28, 2011 na 8:04 PM
Daalụ, Sean. Ejiri m ActiveCollab dịka VP nke New Media na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Site na ọtụtụ ndị nwere oke n'ime ya na ọtụtụ narị ndị na-ahụ maka mpụga n'èzí, anyị chọrọ ngwọta nke onwe anyị nwere ike ịhazi ma jikọta na ngwa ọdịnala ndị ọzọ.
Mana ekwuru eziokwu, ActiveCollab dị ntakịrị ma isi ọwụwa ịzụ / nkwado. Echeghị m na Mavenlink dị n'oge ahụ. 🙂
Jenụwarị 30, 2011 na 6:05 PM
Da dị ka Onit. Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ma Mavinlink bụ ihe ga-amasị ndị ọka iwu. Daalụ maka iwebata m ntị. Agbalịrị m mbipụta Iwu PBworks ma nwee mmasị na ya maka mmekorita ọdịnaya niile, mana ọ na-adị ka PM etiwara na wiki. Nke ahụ kwuru, ọ dịla anya kemgbe m lechara PBworks anya.
Feb 1, 2011 n’elekere 3:42 nke abali
Hmm, nke ahụ bụ echiche na-adọrọ mmasị, Paul. Enwere m ike ịdị na-ezighi ezi banyere nke a, mana ọ dị ka ndị ọka iwu ga-enwe oke mmetụta banyere ihe egwu dị na itinye ozi ndị ahịa na gburugburu "ọrụ igwe ojii". Nwere ike ịrụ ụka na igwe ojii nwere ike ịnwe nchebe karịa netwọkụ nkeonwe dị n'ime ụlọ ọrụ iwu, mana nsogbu bụ na ọ bụrụ na enwere nghọtahie nke data ndị ahịa, onye ga-aza ajụjụ, ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ igwe ojii?
O yiri ka ị maara nke ọma na oghere a. Kedu ihe ị ga-eme na nke a? Kedụ ka ndị otu ọrụ iwu si na-ebelata ihe egwu ha mgbe ha na-arụ ọrụ igwe ojii?
Feb 2, 2011 na 1:33 PM
Had lere LumoFlow anya (http://www.lumoflow.com)?
Ọ na-enye ụzọ ọzọ dị ọnụ ala karịa Basecamp ma dịkwa mfe iji, ọkachasị maka ndị ọrụ oge mbụ yabụ ọ zuru oke maka mmekọ ndị ahịa. Enweghị ọrụ ịgba ụgwọ ọ bụla mana ebe a na-elekwasị anya na imepụta gburugburu ebe obibi na-arụsi ọrụ ike (ọ bụghị njikwa ọrụ dị ka Basecamp).
Mee 2, 2012 na 9: 29 PM
Achọtara m blog gị site na nchọta Google… you ka na-eji Mavenlink? Echiche? Ọ bụ ezie na m bụ nwoke na-arụ ọrụ (ịre ahịa weebụ), achọrọ m ezigbo ngwá ọrụ PM. Anọ m na-eji WorkETC, mana enweghị m obi ụtọ na ya. Basecamp dị ka ọ bụ ihe dị mma maka otu onye ọrụ.
Sep 11, 2012 na 6: 36 AM
M na-akwado gị ka ị gbalịa Comindware, ngwọta na-agbanwe agbanwe karịa Basecamp, nwere nnukwu njirimara nke ịkọ akụkọ ozugbo.
Jenụwarị 9, 2013 na 12:07 PM
Kedu ka ị si banye? Achọpụtala m post a (afọ 2 gachara!)
Ana m enyocha ihe ị ga-eji… nhọrọ dị ihe karịrị akarị!